NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Analytics - Gara Nhanho Mberi Nguva Dzose ...
Gara Nhanho Mberi Nguva Dzose!
Kurumidza kuita yako Dhijitari Shanduko rwendo ne NewGenApps
Zvipo zvinopa masevhisi
Isu takagara tichiona megatrends pakutanga, Nhare, Cloud, Big Data, AI / ML, Blockchain, Kudzidza Kwakadzika, NoSQL, IoT, IIoT Analytics uye Insights, GraphQL, Midziyo, Kubernetes, nevamwe kutumidza mashoma mazhinji. Vashoma kwazvo vakazviita nekumhanya uye chiyero sesu!
Fungidzira imba yako ichitaura newe kana kumotokari yako. Mukova kutaura nemagetsi switch. Hukuru! Handizvo here?
WEB UYE KUSHANDISA
Isu tinokudziridza huwandu hweWebhu maapplication anogona kugadzirisa akasiyana siyana matambudziko nenzira kwayo zvichienderana nezvinodiwa.
iPhone, iPad, Android, Facebook & Customize Google Apps application kuvandudza
Yakakura mune angangoita ese chikamu kungave kwehutano, dzidzo, mari, kugadzira, Etc.
ML chiitiko chekuongorora dhata chinogadzira iyo yekuongorora modhi chivakwa.
Davi re chakagadzirwa Intelligence inobata nekugadzira, kunzwisisa & kuongorora mitauro.
Kuona Kubiridzira, Kuderedza Mutengo uye Kupa Zvipupuriro nerubatsiro rweBig Data Analytics.
Kupa Cloud Yekufambisa Services, Cloud Kubata Services uye IaaS / PaaS.
Kubata pamwe nedhijitari nharaunda mune chaiko uye zvakare kugadzira chaiyo-yehupenyu simulations
Inogadzira nharaunda yakadaro mukati mekushandisa iyo inosangana nezvazviri zviri mukati menyika.
Amazon Web Services, ichipa yakazara Cloud Services Platform.
Iyo sainzi yedata uye zvivakwa zvinovaka matanho epasi akakukomberedza kuti uwane ruzivo rwakakosha mune zvinoitika nekubatana. Chinyorwa chekufarira kukuru pamwe nekuwanda kwemahombekombe emadhisiki ekushandisa ekupa simba rekugadzirisa mapatani kubva kuhuwandu hweruzivo rwusina kurongeka.
Huchenjeri hwekugadzira huchenjeri hunoratidzwa nemuchina, kusiyana nehungwaru hwepanyama hunoratidzwa nevanhu nemhuka, izvo zvinosanganisira kuziva nekunzwa. Musiyano uripo pakati pemapoka ekare neyekupedzisira unowanzo kuratidzwa nechidimbu chinosarudzwa.
Iko kudzidza kwemakomputa algorithms anovandudza otomatiki kuburikidza neruzivo & nekushandisa data. Maalgorithms anoshandiswa mumhando dzakasiyana siyana dzekushandisa, senge muemail kusefa & kuona kwemakomputa, uko kuri kwakaoma kana kusingakwanisike kugadzira zvakajairika algorithms yekuita mabasa.
Zvemagariro midhiya inopa chikuva chakakura chevashandi kuti vataurirane nevateereri vavo nevatengi. Nekushandisa maturusi akakodzera uye nehunyanzvi maitiro, iwe unogona kukudziridza hukuru hunotevera uye uve unoenderana neindasitiri hunhu.
Imwe yeanonyanya kukosha matekinoroji gumi iri ndeye Cloud Computing. Makore anoita kuti mabhizinesi akwanise kupa akasiyana masevhisi pane zvinodiwa, uye zvakare bvumidza vashandisi veinternet kuwana aya masevhisi vasina kutenga zvigadzirwa zvitsva.
Zvishandiso zvekutengesa zvinogona kuteedzera kufambira mberi kwako uye nekupa chiyero chekuzvidavirira icho chinoita kuti iwe ubudirire. Nekugadzirisa zvinyorwa zvako, unogona kuwedzera kumhanya kwaunovhara madhiri. Ita shuwa kuti pombi yako yagadzirwa, wozoitarisa kazhinji.
Blockchain tekinoroji yechimurenga inogona kuita kuti kutengeserana kuve nyore uye kuve kwakachengeteka. Parizvino, chiyero icho vanhu vanotenga pamhepo chiri kuwedzera, uye izvi zvave nekukonzera kuwedzera kwemabhoti uye spamming emawebhusaiti.
ROBOTIC MAITIRO AUTOMATION
Automation yemitemo-yakavakirwa mabasa pamwe nekushandisa kweyakaomesesa software mhinduro kudzikisira kutsamira kwevanhu pane chiitiko chebasa. Kugadzirisa dhatabhesi muCRMs, ERPs, Kuteedzera kweVatengi pasina tarisiro.
Kutonga iyo indasitiri yehunyanzvi nehurongwa hwayo hunokosheswa, chatbots akangwara ekukurukurirana vamiririri vanofambidzana nevanhu. Isu tinotora zvinhu nhanho kumberi nekuvandudza ayo bots, akanyatsogadzirirwa maindasitiri ese.
Our moyo Values
Maitiro atinobata kuumba hwaro hwatinoitira basa nekuzvibata isu pachedu.
Tinotenda mukuva nemitemo yakanaka yetsika nekuita zvakanaka, zvisinei kuti ndiani ari kuona.
Munhu ane danho anotanga kuita zvinhu zvitsva. Kana iwe ukatora danho rekutanga, iwe uri kuda kuti zvinhu zviitwe wega.
Rwendo rwekuvandudzwa kwakanaka kweumwe neumwe uye kugadzirisa zvehunyanzvi pamwe nepamene.
Kana iwe uine chinangwa chekuita chimwe chinhu, iwe wakatsunga kuti chiitwe. Kana iwe uine chinangwa, une chinangwa kana chinangwa.
Kutevedzera pfungwa nyowani, mapatani matsva uye kufunga kwekugadzira kugadzirisa nzira iyo zvinhu zviriowanzoitwa.
Nei kusarudza Us?
Kwatiri, harisi basa chete - tinodada nemhinduro dzatinounza uye tisingagutsikane kudzamara mapurojekiti asangana nemipimo yedu pachedu yepamusoro.
Yenguva Yakareba Kudyidzana
Isu tinogara tichiedza kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi vedu uye nekuvaka hukama hunogara navo.
Tine 900+ yakasimba yevatengi-base.
Vamwe vevatengi vedu vatakatanga kushanda navo muna2008 vachiri kushanda nesu, nemaapps avo airatidzwa kakawanda paApp Stores neGoogle Play, mablog nemagazini.
Paavhareji, isu tine yakatenderedza 80% yekudzokorora bhizinesi.
Isu tanga tichigadzira nharembozha kubvira iOS neApple vakatanga kuburitswa kune vanogadzira muna 2008.
Isu tine timu ine ruzivo yevanamuzvinabhizimusi vanogona kugadzirisa bhizinesi rako kubva pane zviri kumberi netekinoroji nyowani uye nzira dzekushanda.
Isu takaendesa zvakaomarara maapplication pamwe neyakagadziriswa mhinduro zvaida hunyanzvi hwezita.
Isu tinopa akati wandei masevhisi kubva dhizaini, nharembozha (yemuno, muchinjikwa-chikuva), webhusaiti kuvandudza uye gore mhinduro kuitira kuti iwe haufanire kutsvaga akasiyana zvikwata kumwe uko. Rangarira:
Isu tine nyanzvi-dzenyaya nyanzvi (maSMM) akasarudzika matekinoroji avo.
Isu zvakare tinopa kune gore komputa kuburikidza neAmazon Web Services (AWS) kupa yakavimbika gore yakavakirwa mhinduro kune ako ese bhizinesi zvido.
Isu tinoisa mari mune yedu tdziva rakawandisa revashandi vedu kuti vagare pamberi pezvido zvetarenda kuburikidza nekuenderera mberi kwekuongorora maitiro.
Isu tinonyatsoongorora nhengo dzechikwata chedu isu tichivatsvaga.
Chikwata chedu chinowanzoenda kumisangano yekuvandudza (seWWDC).
Isu tinozvichengeta isu pachedu neazvino kufambira mberi mumatekinoroji atinoshanda pairi.
Isu tinonzwisisa kana mari yekudyara isina ROI yakanaka saka mari yacho haifanire kuitwa.
Yakakwira mhando, yakachipa mutengo mhinduro uchishandisa offshore modhi.
Kushandisa matemplate akaomeswa isu tinoona kuti tinogadzira mamiriro ekukunda uye iwe unowana yakakwira RoI.
Isu tinoteera inononoka uye inoenderana nehupenyu hweprojekiti kutenderera kuti tibatsire timu yedu kupindura mukusafungidzira kuburikidza nekugara kuchidzokorora
Tinogona kuzvishandura isu kuti tishandure uye kwakanyanya kubatana.
Kana iwe uri wekutanga uye uchida kuona kuti chigadzirwa chako chinoshanduka sei padanho rega rega, saka uri panzvimbo chaiyo. Iwe unogona chengetedza yako prodct padanho rega rekusimudzira kwayo.
Mhinduro Dzakanyanya kunaka kune yako Business
Ini ndaifara zvakanyanya neprojekiti yangu na NewGenApps. Chikwata chakatanhamara. Inoteerera kwazvo uye inobvunza. Vanobvunza mibvunzo yakakosha uye vanopa mazano akanaka kwazvo zvisinei nenyaya yacho. Ini ndaigara ndichiziva kuti ndaive mumaoko akanaka uye ndaizowana chaizvo zvandaikumbira- kana zvirinani. Kutaurirana kuri, nekure, NewGenApps chikuru pfuma. Ini ndaigara ndichigona kuwana yakajeka uye inotaura mhinduro pakarepo. Ini handina kumbofanirwa kumirira kana pester mhinduro- yaigara ichiuya nekukasira. Chikwata chine hunoshamisa hwebasa uye chine hanya zvakanyanya nezvevatengi vadzo. Ini ndakanyatsoronga kuita basa rakawanda na NewGenApps, uye kurudzira chero munhu anovaka app aite zvakafanana. Anotyisa timu inoburitsa mhando yemhando. Ini ndichagara ndichitarisa kuna NGA kutanga kune chero chirongwa.
Ini ndaifara zvakanyanya neprojekiti yangu na NewGenApps. Chikwata chakatanhamara. Inoteerera kwazvo uye inobvunza. Vanobvunza mibvunzo yakakosha uye vanopa mazano akanaka kwazvo zvisinei nenyaya yacho. Ini ndaigara ndichiziva kuti ndaive mumaoko akanaka uye ndaizowana chaizvo zvandaikumbira- kana zvirinani. Kutaurirana kuri, nekure, NewGenApps chikuru pfuma. Ini ndaigara ndichigona kuwana yakajeka uye inotaura mhinduro pakarepo. Ini handina kumbofanirwa kumirira kana pester mhinduro- yaigara ichiuya nekukasira. Chikwata chine hunoshamisa hwebasa uye chine hanya zvakanyanya nezvevatengi vadzo. Ini ndakanyatsoronga kuita basa rakawanda na NewGenApps, uye kurudzira kuti chero munhu anovaka app aite zvakafanana. Anotyisa timu inoburitsa mhando yemhando. Ini ndichagara ndichitarisa kuna NGA kutanga kune chero chirongwa.
Akashik Inopindirana Midhiya
Newgenapps akaita basa rinoshamisa pane yangu chirongwa. Chikwata chakaenda mamaira ekuwedzera munzvimbo dzese! Hunyanzvi hwavo, hwakadzika hunyanzvi hunyanzvi, hukuru hunyanzvi hwekuronga, kutaurirana kukuru uye neruzivo manejimendi manejimendi kwakaita kuti chirongwa ichi chibudirire. Zvese zvinhu kubva kuchisarudzo kusvika kwekupedzisira kununurwa - Newgenapps yakabvisa makwikwi acho. Pakauya zvinetswa zvehunyanzvi, timu yakakurumidza kuona sarudzo dzekugadzirisa uye ndokunyatso kuvazivisa nechikwata chedu kusarudza sarudzo yakanakisa. Newgenapps vaive zvakare vadzidzisi vakuru munzvimbo dzataishaya ruzivo - vachitifambisa nenzira inodiwa uye nhanho dzekuti basa riitwe nekukurumidza uye nemazvo. Iyi ikambani iwe yaunogona kuvaka hukama hwakareba hwakareba ne. Isu tinonyatso kuvakurudzira uye tinotarisira kuzoshanda navo Newgenapps pane yedu inotevera chirongwa.
Iyo kambani Apptation Inc
Zvekupedzisira kubva Blogs
Intelligent Maitiro otomatiki: Mabhenefiti, Matambudziko, uye Mashandisirwo
Nov 30 | Akangwara kushandisa michina
Intelligent Process Automation (IPA) is another aspect of technology that paved the way for many new inventions and...
Chikonzero Nei Uchifanira Kushandisa Pre-Employment Unyanzvi Kuedzwa Paunenge Uchihaya
Nov 11 | mushandi wevashandi, Human Resources
Matanho mashanu eKukura kweBhizinesi
Nov 11 | bhizinesi rekubvunza
Iko hakuna nzira yegumbeze yekutsanangura kukura kwebhizinesi diki: zvinoreva kuwedzera mari? Kana kukura mutengi wako...